New Technology – AutoMyanmar
Posts tagged with: New Technology
Lamborghini ဟာအနာဂတ်လျှပ်စစ်ပြိုင်ကား ဒီဇိုင်းတွေပါဝင်တဲ့ Terzo Millennio ကိုတော့ ၃၃ ကြိမ်မြှောက်ကျင်းပတဲ့ International Automobile Show မှာပြသနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ International Automobile ကိုတော့ Paris မြို့မှာ ဇန်နဝါရီ ၃၁ ရက်နေ့ကနေ ဖေဖော်ဝါရီ ၄ ရက်နေ့အထိကျင်းပသွားမှာပါ။ ကျင်းပမယ့် ၅ ရက်တာကာလအတွင်းမှာ Terzo Millennio ဟာတော့ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ Terzo Millennio ဟာတော့လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ နိုဝင်ဘာလက USA မှာစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ကားတစ်စီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Lamborghini Centro Stile နဲ့အနည်းငယ်ဆင်နေပြီး အနာဂတ်ဒီဇိုင်း၊ နည်းပညာတွေ ပါဝင်တဲ့ကားတစ်စီးပါ။ စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်း၊ ဒီဇိုင်းပိုင်းတွေကောင်မွန်နေရုံသာမက လျှပ်စစ်ပြိုင်ကားအနေနဲ့ပါရောက်ရှိလာမှာဖြစ်တာကြောင့် အနာဂတ်မှာ ပြိုင်ကားကြိုက်နှစ်သက်တွေရဲ့အသည်းတစ်ခြမ်းဖြစ်လာမှာတော့အသေအချာပါပဲ။ Lamborghini ဟာ အနာဂတ်ပြိုင်ကားတွေအတွက် Energy storage systems, innovative materials, propulsion system, […]
Sensing Driver-Assist Technology ကို Odyssey မှာမိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ Honda!
Honda ဟာ Sensing Driver-Assist Technology ကို နောက်ဆုံးထွက်၂၀၁၈ Odyssey model တွေမှာထည့်သွင်းမိတ်ဆက်မယ့်အကြောင်းကိုတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကပဲ Honda နယူးဆီလန်က ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Odyssey LS နဲ့ S တို့မှာထည့်သွင်းမိတ်ဆက်သွားမှာပါ။ Honda အနေနဲ့ Odyssey LS နဲ့ Odyssey S တို့ကို ဇန်နဝါရီလ အကုန်လောက်မှာဖြန့်ချီဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့တာပါ။ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ နီးစပ်ရာ တာဝန်ရှိ Honda ကိုယ်စားလှယ်တွေဆီကို ဒီနေ့ (သို့) မနက်ဖြန်မှာပဲသွားရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ နည်းပညာအသစ်အပြင် ကားရဲ့အပြင်ပိုင်း၊ အတွင်းပိုင်း စတာတွေကိုလည်းပြင်ဆင်တိုးမြှင့်ထားပါတယ်။ NVH (Noise, Vibration, Harshness) ပိုင်းကိုလည်းပြင်ဆင်ပေးထားပါသေးတယ်။ “The addition of Honda Sensing on the new Odyssey LS […]
Honda, New Technology
Hyundai အနေနဲ့ မကြာခင်ထွက်ရှိတော့မယ့် Fourth Generation Santa Fe ရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကပဲချပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Santa Fe ဟာ SUV အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး First generation ကတော့ ၂၀၀၁ ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တာပါ။ Second generation ကတော့ ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာထွက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး Third generation ကတော့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာထွက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Generation တစ်ခုခုနဲ့တစ်ခု အပြောင်းအလဲတွေမှာ ကွာဟသွားတဲ့ခုနှစ်တွေမှာတော့ System အပိုင်းမြှင့်တင်ထားတဲ့ model အသစ်တွေထွက်ရှိခဲ့တာပါ။ Hyundai Motor has unveiled its first facts about the New Generation Santa Fe, which will celebrate its world […]
WEVC Technology ကိုအနာဂတ်အတွက် ချပြလိုက်တဲ့ Qualcomm!
Qualcomm ရဲ့နည်းပညာဖြစ်တဲ့ WEVC (Wireless Electric Vehicle Charging) ကိုပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီ ၁၇ ရက်နေ့တုန်းက ဂျပန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ Automotive World မှာ ကျွန်တော်တို့ AutoMyanmar က Qualcomm ရှိရာကို သွားရောက်လေ့လာပြီးသိရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းတွေမှာ တွေ့မြင်ရမယ့်ကားတွေက လျှပ်စစ်ကား (EV) တွေပဲဖြစ်တော့မှာကြောင့် အနာဂတ်နည်းပညာလို့တင်စားလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ WEVC အကြောင်းပြောဖို့ Halo development အကြောင်းလေးကိုအရင်စပါရစေ။ Halo development ဆိုတာကတော့ New Zealand မှာရှိတဲ့ Auckland တက္ကသိုလ်ရဲ့ developement lab တစ်ခုဖြစ်ပါ။ ၁၉၈၈ မှာ Wireless power transfer system စတင်တီထွင်နိုင်ခဲ့တဲ့ lab တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၂ မှာတော့ Qualcomm ဟာ […]
Automotive World, New Technology, Qualcomm
Brain to Vehicle Technology ကို CES 2018 မှာချပြမယ့် Nissan!
Las Vegas မှာကျင်းပမယ့် CES 2018 မှာတော့ Nissan အနေနဲ့ Brain to Vehicle (B2V)ဆိုတဲ့ Technology အသစ်ကိုချပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကမ္ဘာရောင်းအားအကောင်းဆုံး EV (Electric Vehicle) တွေအပြင် Nissan ရဲ့အနာဂတ်နည်းပညာအချို့ကိုပါဖော်ပြသွားဉီး မှာပါ။ B2V ကတော့ ကားမောင်းသူရဲ့ ဉီးနှောက်ကို Scan ဖတ်တဲ့ Tech ပါ။ ဉီးနှောက်လှိုင်းတွေကို Scan ဖတ်ပြီးတာနဲ့ မောင်းနှင်သူရဲ့ကားမောင်းတဲ့အနေအထားပုံစံတွေကို ခန့်မှန်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ မောင်းနှင်သူပြုလုပ်တဲ့ ကားကိုဘယ်ကွေ့၊ ညာကွေ့၊ အရှိန်မြင့်တာ၊ ဘက်ရိတ်နှင်းတာ အစရှိတဲ့လှုပ်ရှားမှုပေါင်းစုံကို Scan ဖတ်ထားပြီး မောင်းသူ မပြုလုပ်မီ ၀.၂ နဲ့ ၀.၅ စက္ကန့်လောက် စောပြီးဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ B2V Tech ကိုတော့ဉီးခေါင်းမှာ Device […]
Motor Show and Event, New Technology, Nissan